फेरि ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»अर्थ»फेरि ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
फेरि ह्वात्तै बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
By रबि धिताल on ३ आश्विन २०७५, बुधबार ०३:३३ अर्थ
काठमाडौं, ३ असोज: नेपाली बजारमा आज (बुधबार) अमेरिकी डलरको भाउ ह्वात्तै बढेको छ। मंगलबारको तुलनामा आज अमेरिकी डलरको भाउ ७५ पैसाले बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर अनुसार आज एक यूएस डलरको खरिददर मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ ४७ पैसा छ भने विक्रिदर मूल्य १ सय १७ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै एक मलेसियन रिंगिटको खरिददर मूल्य २८ रुपैयाँ ११ पैसा छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ २६ पैसा छ। एक यूके पाउण्डको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९७ पैसा छ भने बिक्रिदर १५३ रुपैयाँ ७५ पैसा छ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५ पैसा छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २१ पैसा छ। त्यस्तै, एक कतारी रियाल खरिददर ३१ रुपैयाँ ९९ पैसा र विक्रिदर ३२ रुपैयाँ १५ पैसा छ। एक युएई दिर्हामको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७१ पैसा र विक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८७ पैसा तोकेको छ।